Molina de Aragón | Vaovao momba ny dia
Molina de Aragón dia iray amin'ireo tanàna medieval tsara indrindra any Guadalajara (Espana). Any avaratra atsinanan'ny faritany no misy azy, izy dia tanàna manana harena lehibe. Ny dia mankany Molina de Aragón dia dia mamakivaky ny Moyen Orient manaraka ny dian'ny Cid Campeador. Nitsangana teo am-poton'ny tranobeny izy io, nitahiry tetezana Romanesque, ny faritra jiosy ary ny fipetrahana Moorish ary koa trano Renaissance sy Baroque marobe izay taratry ny famirapiratana ho renivohitry ny tompona mahaleo tena ao Molina.
Saingy, toerana inona avy no ilaina mandritra ny dia mankany Molina de Aragón?
1 Castle- Fortress
2 Fiangonan'i Santa Clara
3 Fiangonan'i san francisco
4 Fiangonan'i San Gil
5 Ny tetezana Romanesque
6 Palacetes of Molina de Aragón
Eo amoron'ny havoana manjaka ny lohasaha no trano mimanda mahavariana indrindra izay hita ao Guadalajara ary manamarika tanteraka ny toetran'ny Molina de Aragón. Ao amin'ny trano mimandan'i Molina de Aragón dia azontsika atao ny manavaka ny trano mimanda voahodidin'ny rindrina nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary namboarin'ny tompon'ny Molina voalohany, Manrique de Lara, ary ilay antsoina hoe Torre de Aragón izay namboarina teo ambonin'ny Silamo. lapa ary ity iray ity ao amin'ny trano mimanda Celtiberian teo aloha.
Ny fidirana amin'ny Castle of Molina de Aragón dia amin'ny alàlan'ny Puerta del Reloj, izay ampahany amin'ny rindrina manodidina ny fefy, miaraka amin'ireo tranobe famantaranandrony, namela toerana malalaka tao anatiny izay tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nisy vohitra antenantenan-dRamatoa de Molina Doña Blanca Alfonso. Porofon'izany ny akanjo fitondra any amin'ny fiangonana Romanesque any Santa María del Collado.
Ny trano mimanda dia azo idirana amin'ny varavarana misy andohalambo maranitra. Miampita azy isika dia afaka manamarina ny hatevin'ny rindrina. Tao amin'ny kianja filalaovana dia nisy ny fonenan'i Señor de Molina, ny tranon'omby, ny lakozia, ny lava-drano, ny trano fitehirizana ary ny tranomaizina. Etsy ankilany, hitantsika fa ny tilikambo dia misy gorodona telo ampifandraisin'ny tohatra vy ary misy varavarankely lehibe misy tohany maranitra.
Avy ao amin'ny trano mimanda dia tonga ao amin'ny Torre de Aragón, trano mimanda faharoa misy tilikambo misy pentagonaly voahodidina rindrina misy rindrina izahay. Fananganana tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io, na dia izany aza no misy ny trano mimanda arabo taloha sy ny trano mimanda Celtiberia. Ny Torre de Aragón dia misy gorodona telo sy varavarankely telo. Eo an-tampon'ny tilikambo dia misy teras-boasary izay mamela anao hahita ny faritra mahatalanjona ao Molina.
Ny fitsidihana ny trano mimanda ao Molina de Aragón dia azo atao maimaimpoana (3 euro) na tarihina (5 euro) miaraka amina vondrona farafahakeliny misy olona 10. Ny maraina dia miainga ny Office Tourist Office amin'ny 11 ora sy sasany (Calle las Ti Tiñas, 30. Telefaona: 62 949) fa tsara kosa ny manamarina ireo andro ahafahana manao izany ankoatry ny faran'ny herinandro. Amin'ny tolakandro, ny fitsangatsanganana an-tanàna ny tanàna dia voalamina amin'ny 832098 ora sy sasany hariva saingy tsy hisokatra ny lapa. Ny Torre de Aragón, navadika ho foibe fandikana, dia tsidihina misaraka (17 €) taorian'ny fiakarana ny tampon'ny havoana iray.
Fiangonan'i Santa Clara
Sary | Mpandeha tantara
Manakaiky ny lalana mankany amin'ny rindrina ivelany amin'ny trano mimanda, ao amin'ny tanàna taloha, no ahitantsika ny fiangonan'i Santa Clara. Voarakitra an-tsoratra fa nandritra ny vanim-potoana antenantenany dia niambina relika masina maro an'isa ity fiangonana ity ary azontsika atao ny mankasitraka ny fisian'ny famonoana romana farany any Espana miaraka amina faritra tokana ao anatiny.
Fantatra taloha amin'ny hoe Santa María Pero Gómez, voalaza fa ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia natsangana tamin'ny alalàn'ny lehilahy iray antsoina hoe Pero Gómez izay havana sy mpitondra tenin'i Doña Blanca Alfonso de Molina ny tempoly. Ho fahatsiarovana ny nananganana azy dia nahazo io anarana io ny tempoly na dia ankehitriny aza dia fantatra amin'ny anarana hoe Santa Clara ny fiangonana satria mifandray amin'ny trano fitokanana tsy fantatra anarana. Ny fidirana lehibe mankany amin'ny fiangonana dia miorina eo anilan'ny fiangonana, amina vavahady malaza izay tratry ny fiakarana tohatra sasany.
Fiangonan'i san francisco
Natsangan'i Doña Blanca Alfonso tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX mba hipetrahan'ny moanina voakolokolo manaraka ny fomban'ny Gothic fa nandritra ny tantarany dia nisy fanavaozana isan-karazany misy ankehitriny ny fomba isan-karazany toy ny ivelany Baroque sy ny atitany Gothic, Renaissance ary Baroque. Manana tokana tokana ny fiangonana ary rakotra vazy mihosin-tady mipetaka amin'ny andry.
Nandritra ny Ady Fahaleovantena Espaniôla dia nandidy ny handoroana an'i Molina de Aragón ny frantsay ary rava ny ampahefatry ny tranony. Tsy maintsy nandao ny monasitera ny Franciscanana ary simba be izany.
Tamin'ny 1836, noho ny fakana an-keriny an'i Mendizábal dia noroahina ireo moanina ary navadiky ny Fanjakana ho monja hopitaly ny monasiteran'izy ireo. Taorian'izay dia nilaozana nandritra ny am-polony taona maro ny fiangonana mandra-pahatongan'ny taona 1886 ny Sisters of Charity of Santa Ana dia nanangana hopitaly ho an'ny mahantra eto, izay nantsoin'izy ireo hoe Hospital de Santo Domingo. Amin'izao fotoana izao ny trano dia alain'ny trano fitaizana be antitra tantanan'ireto masera ireto? ary avy amin'ny Regional Museum of Molina de Aragón.
Fiangonan'i San Gil
Ny fiangonan'i San Gil na Santa María la Mayor de San Gil dia avy amin'ny Romanesque, na dia efa tafaverina amin'ny laoniny tanteraka aza taorian'ny fijaliana tamin'ny afo mahatsiravina izay niteraka fahasimbana tsy azo sitranina tamin'ny 1915. Ny taolam-paty an'i Doña Blanca dia nafindra teto avy amin'ny fiangonan'i San Francisco, izay nilazany fa te halevina amin'ny fotoan'ny Raikitra Mendizábal fa ny afo kosa dia nanimba ny zava-drehetra ary tsy nisy notehirizina. Na ireo asan'ny zavakanto notehirizina tao.
Ny tetezana Romanesque
Nandritra ny taonjato maro, tetezana miendrika Romanesque no mamaky ny renirano Gallo, sampandraharahan'ny Tagus, hampifandray ny Monasiteran'i San Francisco sy ilay tanàna taloha. Avy amin'izany ianao dia afaka maka sary tena mahafinaritra an'i Molina de Aragón. Namboarina tamin'ny vato sandaly mena no namorona azy amin'ny maso telo.
Palacetes of Molina de Aragón
Nandritra ny fotoan'ny famirapiratana niainan'i Molina de Aragón dia fianakaviana mendri-kaja maro no nanorina lapa manja be tao. Noho izany, i Molina dia iray amin'ireo tanàna Castilian manana lapa maro ao amin'ny foibe manan-tantara: ny Palacio de los Molina, ny Montesoro, ny Arias, ny Garcés de Marcilla na ny Marqués de Villel, ankoatry ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Molina de Aragon